bipụtara 08.07.15 emelitere22.09.20
Ndụmọdụ ọkachamara ọkachamara (CÉP) bụ ohere maka onye ọrụ ọ bụla iji tụlee ọnọdụ ọrụ ha yana, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iji zụlite, hazie ma mejuputa atumatu maka mmepe ọkachamara, njikọta , mmepe nka, asambodo ndị ọkachamara, mmegharị ime ma ọ bụ nke mpụga, mmughari, mgbanwe ndị ọkachamara, ịmaliteghachi ma ọ bụ mepụta ọrụ, wdg.
Ọ na - enye aka, na ndụ mmadụ niile na - arụ ọrụ, iji meziwanye ikike ha ịme nhọrọ nke aka ha ma gbanwee, ọkachasị site n'ịbawanye nka ha, ịzụlite nka ha na ịnweta iru eru ọhụrụ. ọkachamara.
Computer Graphics Iji mee ka ndị ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma mara ma na-akwado ha, a na-eme ka ndụmọdụ mmepe ọkachamara (CÉP) sikwuo ike. Ndokwa ndị enyere n'iwu maka nnwere onwe ịhọrọ ọdịnihu ọkachamara ka ekwuputara 5 septembre 2018, na-eduga na nhazigharị nke odida obodo nke ndị ọrụ na-enyefe ọrụ a kemgbe Jenụwarị 1, 2020. N'ezie, Pôle emploi, ndị ọrụ mpaghara, Cap Emploi yana Association maka ọrụ nke ndị isi ọrụ (Apec) na-aga n'ihu Bụrụ ndị ọrụ CÉP. Agbanyeghị, ndị ọrụ ọhụrụ ahọrọla
CÉP - Ndụmọdụ ọkachamara banyere mmepe July 10th, 2021Tranquillus
GỤỌ Nkwekọrịta mkpokọta: ị ga-akwụ ụgwọ ọrụ na-agbanwe agbanwe na onye ọrụ na ezumike ezumike?
gara agaPro-A - Ntughari ma ọ bụ nkwalite site na mmemme ọmụmụ ọrụ
-esonụCPF - Akaụntụ nkuzi nke onwe
ANSSI weputara Observatory of cybersecurity jobs